Vaovao Mould |
Olana mahazatra amin'ny famolavolana lasitra vokatra ao an-tokantrano
Amin'ny vokatra indostrialy maro, ny takiana amin'ny haben'ny vokatra dia avo dia avo. Noho izany, ny mpamolavola bobongolo an'ny vokatra an-trano dia takiana amin'ny plastika amin'ny famolavolana bobongolo mety mba hanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra indostrialy. Na izany aza, tao amin'ny proc ...
Olana mihemotra amin'ny famokarana lasitra ilaina isan'andro
Ilaina isan'andro ny famokarana bobongolo tsy afaka mamela ny ozinina bobongolo famindrana, ankehitriny ny teknolojia famolavolana ilaina isan'andro dia mandroso kokoa, mba hahatratrarana tsara kokoa ireo fepetra takiana ireo, ilaina ny fihenan'ny bobongolo lehibe, izay sanda azo ampiharina indrindra amin'ny bobongolo ilaina isan'andro. . Izaho ...
Inona avy ireo fepetra afaka manatsara ny kalitaon'ny lasitra crate
Mba hahafahana mamokatra vokatra crate mahay, dia tsy maintsy manome bobongolo Crate misy kalitao isika. Ka inona avy ireo fepetra afaka manatsara ny kalitaon'ny boaty? Mamolavola rafitra fitantanana famolavolana crate feno, mahatsapa ny fitantanana angona vokatra, fitantanana angona data, fitantanana drafitra ary fandaharam-potoana ...
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fahasimban'ny bobongolo dustbin
Betsaka ny antony mahatonga ny fahasimbana sy ny triatra amin'ny bobongolo Dustbin, izay mifandraika indrindra amin'ny firafitra tany am-boalohany, ny firafitry ny vy amin'ny vy, ny endrika sy ny refin'ny fizarana ampahan'ny fizarana ary ny fizotran'ny fitsaboana hafanana. Matetika azo sorohana ny triatra, saingy ny hafanana ...
Ahoana no hitazomana tsara ny volon'ny lasitra vokarin'ny tokantrano
Ny zava-drehetra dia manana fiainana voafaritra. Mba hanitarana ny androm-panompoana dia tokony ho fantatsika ny fomba fikojakojana marina. Ireto manaraka ireto dia ny fomba fikojakojana marina ho an'ny bobongolo vokatra ao an-trano. Voalohany, ny fikojakojana tsindraindray ny fiolahana famolavolana bobongolo ho an'ny vokatra ao an-trano dia misy isaky ny ...
Famaritana isan'andro momba ny fikolokoloana ho an'ny bobongolo ilaina isan'andro
Ny ain'ny serivisy amin'ny bobongolo ilaina isan'andro, ankoatry ny famolavolana bobongolo faran'izay tsara, ny famokarana haingam-pandeha avo lenta, ny fitsaboana hafanana avo lenta, ary ny fisafidianana ny fitaovana fanodinana, ny bobongolo ary ny anton-javatra hafa koa dia ampahany lehibe amin'ny fampiasana sy fikojakojana. , anio dia te ...
Ahoana ny fomba hanamboarana lasitra crate amin'ny androm-piainana lava
Voalohany indrindra, famolavolana sy firafitra Crate mould tsara. Ny lasitra crate mahay dia tsy maintsy manana rafitra bobongolo lavorary alohan'ny hanombohana ny tetikasa. Ka nandany fotoana be dia be i Heya tamin'ny famakafakana ny firafitry ny bobongolo sy ny volavolan'ny bobongolo, ao anatin'izany ny zoro demoulding, ny microcosm ambonin'ny vokatra, ny rafitry ny vavahady, ny ...
Ny toerana misy ny taolan-tehezana sy ny gussets dia misy fiatraikany amin'ny endrika lasitra crate an'ny fivoriambe
Ny mason-tsivana matevina dia tsy maintsy tandremana rehefa manamboatra taolan-tehezana sy gussets. Ny fotoana maharitra kokoa dia azo antenaina raha toa ny taolan-tehezana na ny gusset koa mifandraika amin'ny banga, rindrin'ny singa, milentika, miolakolaka, tsipika fanodinana (vokatry ny famatrarana famatrarana betsaka). Ny toerana misy ny ...
Maninona no ilaina ny mangatsiaka amin'ny lasitra latabatra
Ny famolavolana ny rafitra mangatsiaka dia tena zava-dehibe amin'ny famolavolana tsindrona. Izy io dia satria ny famolavolana ny vokatra plastika dia mihamangatsiaka fotsiny amin'ny henjana sasany, ary avy eo ny vokatra plastika dia navotsotra avy amin'ny bobongolo latabatra hialana amin'ny fiovana noho ny hery ivelany. Hatramin'ny nihena ...
Ny bobongolo seza dia nanjary fanaka lehibe sy fampiasam-bola
Ankehitriny, ny fironana amin'ny fampiasana fanaka plastika dia mitombo haingana. Ny fanaka plastika dia nahomby tamin'ny tsena lehibe. Ny fanaka plastika dia maivana, mateza, tsy tantera-drano, mora entina, tsy lafo, mahafinaritra amin'ny endriny, ary azo atao amin'ny loko sy endrika maro karazana, voalohany indrindra ho an'ny ...
Inona ny fizotry ny fivoarana mahazatra amin'ny lasitra fanindronana?
Ataovy sary aloha ny sarintany bobongolo Alohan'ny hanoratanao ny sarin'ny fivorian'ny tompony dia tokony hosarihana sy hifanaraka amin'ny takian'ny fizarana sy ny angon-drakitra ireo sary. Ny habe azo antoka amin'ny fizotrany manaraka dia homarihina amin'ny teny hoe "haben'ny fizotrany" amin'ny sary. Raha, a ...
Ny toerana misy ireo tsipika fanamainana dia manakiana amin'ny fanatsarana ny ampahany mahomby amin'ny fanatsarana ny famokarana ampahany. Ny sary 5. 16 dia maneho ny torolàlana ho an'ny fantsom-panafana fantsom-panafana. Ny teboka iray tokony hotadidina dia ny savaivon'ny fantsom-panafody tokony ho lehibe ampy hanana reasonab ...